काठमाडौं । परम्परागत उपचारकर्मीको एउटै मापदण्ड तयार गरिने भएको छ । जनस्वास्थ्य ऐनले परम्परागत उपचारकर्मीको लाइसेन्स स्थानीय तहमार्फत दिलाउने बन्दोबस्त गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभर एउटै मापदण्ड तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाएको हो । मापदण्ड निर्धारण गर्न आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा...
यतिबेला देशभर गर्मी बढेको छ । जाडोयाममा भन्दा यो समयमा तुलनात्मक रूपमा स्वास्थ्य समस्या बढी हुने गर्छ । गर्मीमा धेरै पसिना निस्कने हुँदा शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ । त्यसैले, पानीको सेवन बढाउनुपर्छ । यसले जलवियोजन हुन पाउँदैन । प्रशस्त पानी पिउनाले शरीरको तापक्रम पनि सन्तुलित रहन्छ । गर्मीयाममा य...
वैशाख १९, काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका २१ वर्षीय एक युवकको बर्डफ्लुबाट मृत्यु भएको छ । गत चैत १० गते ज्वरो र खोकीको लक्षणसहित शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टेकुमा भर्ना भएका उनको चैत १५ गते मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मृतकलाई इन्फ्लुएन्जा रोगको सं...
प्रोटिन, कार्बाेहाइड्रेड, क्यालोरी, मिनरल्स थोरै पाइने खानालाई जंकफुड भनिन्छ । वैशाख १६, काठमाडौं । अस्वस्थकर (जंकफुड) खानामा पर्याप्त पोषणतत्व छैन र यसले बालबालिकाको समग्र स्वास्थ्यमा खराब गर्छ भन्ने जान्दाजान्दै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई जंकफुड खुवाइरहेका छन् । सस्तो र सजिलै पाइने हुनाले विशेषग...
प्रत्येक वर्ष विश्वभरि करीब १ दशमलव ५ करोड मानिसलाई मस्तिष्काघात (स्ट्रोक) हुन्छ । साथै मस्तिष्काघातकै कारण प्रत्येक वर्ष ६० लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ । यस हिसाबले विश्वमा मस्तिष्काघातका कारण प्रत्येक ६ सेकेन्डमा एकजनाको मृत्यु हुन्छ । मस्तिष्काघात भएर पक्षाघात भएका र जीवन गुमाएकाहरूको संख्या बढिरहेक...
डा. जया रेग्मीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एमबीबीएस र त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट एमडी गरेकी छिन् । उनले ४ वर्ष कान्ति बाल अस्पतालमा मनोचिकित्कसको रूपमा काम गरिसकेकी छिन् । हाल काठमाडौं मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. रेग्मीसँग मनोरोग विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका भवनाथ प्याकुरेलले...
काठमाडौं । संसारभर भइरहेका गतिविधिबारे जान्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुन् स्मार्टफोन, कम्प्युटर र ट्याबलेट । यी साधन आधुनिक जीवनको अभिन्न अंग नै बनेका छन् । तर यसका लाभ जति छन्, हानि पनि त्यति नै छन् । अहिले हरेक अभिभावकको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता बनेको छ स्मार्टफोन, ट्याब लगायतको स्क्रिनमा अत्यधिक झुन...
पुस २४, काठमाडौं । श्वास परीक्षण गरेर शरीरमा क्यान्सर छ कि छैन भन्ने पहिचान गर्न सकिएला ? श्वास परीक्षणबाट विविध क्यान्सरहरूको पहिचान गर्नेतर्फ वर्षौदेखि विभिन्न अनुसन्धान भइरहेका छन् । बेलायतमा अनुसन्धाताहरुको एक समूहले श्वास परीक्षण गरेर क्यान्सर पहिचान गर्ने नयाँ परीक्षण शुरु गरेको छ । ब्रेथ बायो...
पुस २२, काठमाडौं (अस) । ताजा फलफूलबाट निकालिएको जुस पौष्टिक आहारको अभिन्न हिस्सा नै बनेको छ । यो प्रवृत्ति विशेषतः अति व्यस्त, स्वास्थ्यप्रति सचेत उपभोक्ताहरुमा बढी पाइन्छ । हुन त समय अभाव भएको बेला फलफूल ताछेर, टुक्रा–टुक्रा गरेर चपाएर खानु भन्दा त त्यसको जुस बनाएर खाँदा समय पनि बच्यो, शरीरलाई चाहि...
मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा शरीरभित्र क्रमिक रूपमा परिवर्तन भइरहन्छ । यही कारण शरीरका हड्डी, मांसपेशी, जोर्नी लगायत भागमा पनि परिवर्तन आउँछ । योसँगै हाम्रो पोस्चर अर्थात् आसन फेरिन्छ । उमेर ढल्कँदै गएपछि हामी सबैलाई उपयुक्त आसनको आवश्यकता पर्दछ । धेरैले यसलाई व्यर्थ भन्ठान्छन् । तर यसको निकै महत्त्व छ...